Filoha Rajaonarimampianina : “Antoky ny fiainam-bahoaka ny fahamarinan-toerana politika” | NewsMada
Filoha Rajaonarimampianina : “Antoky ny fiainam-bahoaka ny fahamarinan-toerana politika”
Mby aiza ny fiahian’ny fitondram-panjakana ny fiainam-bahoaka. Antoky ny fiainam-bahoaka ny fahamarinan-toerana politika…
“Nandritra izay roa taona izay, nokatsahiko ary notandroviko fatratra ny fahamarinan-toerana ny fiainana politika eto amin’ny firenena. Antoka voalohany handrosoantsika amin’ny fanarenana ny fihariankarena ny fahamarinan-toerana ny fiainana politika. Izay ihany no hitondra fihatsaram-piainana ho an’ny Malagasy.”
Kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny fifampiarahabana teny Iavoloha, omaly, io. Mby amin’ny fahamarinan-toerana politika isika izao. Vita ny fifidianana kaominaly sy senatorialy. Antenaina fa ho tonga amin’ny fahamatorana politika bebe kokoa ny rehetra, azo hafainganina amin’izay ny fiharian-karena.
Tapitra izay ny fitsapatsapana sy ny fifamandrihana politika
“Tapitra ny fitsapatsapana sy ny fifamandrihana politika. Tonga ny fotoana hampivondrona ny hery amin’ny fanafainganana sy fampahatanjahana ny fiharian-karena. Maika hivoaka amin’ny hantsan’ny fahantrana ny Malagasy”, hoy izy.
Mora ny manenjika sy manaratsy, indrindra fa ireo izay hita fa tsy mikendry afa-tsy ady seza politika. Hajaina ny zo maneho hevitra sy ny fahalalahana, fa aoka tsy ho tonga amin’ny fihoaram-pefy amin’ny fampiadiana ny samy Malagasy, ny fanelezana tsaho, fanitsakitsahana ny zon’ny hafa…
Izay vita ho an’ireny faritra madinika ireny, vita ho an’ny firenena sy ny mpiray tanindrazana. Manamaivana ireo mpiray tanindrazana izay manamaivana ireny. Ho an’ny mpiserasera politika sasany, mody jamba sy marenina fa tsy te hahita sy handre.
Mbola ao anaty fahasahiranana ny firenentsika
Mbola ao anaty fahasahiranan’ny firenentsika, tsy mora ny fikarohana ny fomba rehetra hahatafavoaka antsika, araka ny nambarany. Tsy azo terena ny fanarenana. Mampiady saina andro aman’alina izany, nefa tsy atao mahakivy. “Henoko sady mihaino ny feo samihafa avy aminareo vahoaka aho, mahita ny miseho manodidina ahy aho”, hoy ihany izy.
Une réponse à "Filoha Rajaonarimampianina : “Antoky ny fiainam-bahoaka ny fahamarinan-toerana politika”"
Rakotozafy 10/01/2016 à 01:10
Sambory aloha remenabila izay vao be vava. Ny tany no avelanareo mihorohoro lava amin’izay afaka manao izay tianareo hatao ianareo? Ampanjakaina avokoa ny kajikajy politika maloto rehetra, ny harem-pirenena ratsy tanana sy mivoaka hoasy. Ireo Jeneraly tendrena fahatany ireo, inona no mba ho vitan’ireo mihoatra izay efa nataon’ny sasany bekibo sy mpigalabona eny amin’ny Birao ireo? Tsy mazava ny lalan’i Gasikara, kobaka ambava fotsiny io fa tsy mahatafavoaka baolina ny mpitondra amin’izao. AIZA E? Miandry lava H eryyyyyyyyyy!